Impilo - iBezzia | IBezzia
La impilo Ngokuqinisekileyo yeyona ntsimi ibalulekileyo ebomini kwaye ngokwemigaqo ngokubanzi inxulunyaniswa nezinye ezinje ngentlalontle, ukulingana okanye ukungabikho kwesifo. Ke, ngokwe-World Health Organisation, ibhekisa kuyo njengombuso opheleleyo impilo-ntle yomzimba, ngengqondo nangokwasentlalweni.
E-Bezzia sinikezela icandelo kwesi sihloko kwaye kulo, sijongana nezihloko ezinje izifo, iingcebiso zokuba sempilweni okanye ukunciphisa umzimba. Ngalezi zihloko, sifuna ukunika ulwazi ukuze abantu bazi ngokubaluleka kokuzikhathalela, ukutya kakuhle okanye ukwenza umthambo, kodwa bagxininise nokubaluleka kokusebenzisa ezi ngcebiso.
Siyathemba ukuba apha uza kufumana inkuthazo yokunyamekela impilo yakho.
Ukuzivocavoca ukwenza ithoni umzimba wonke ekhaya
por UToñy Torres yenzayo Iiyure ze6 .
Utshintsho kwindlela yokuphila, abantu bayaziqhelanisa neemeko ezintsha kwaye bajonge ezinye iindlela zokuqhubeka nokuphila ...
Umgubo weChickpea: Izibonelelo zayo kunye nemibono emihle yokuyisebenzisa
por USusana godoy yenzayo Iiyure ze10 .
¿Ya has integrado la harina de garbanzo en tu dieta? Lo cierto es que siempre vamos buscando nuevas alternativas a…
Ukubhitya akufani nempilo
por UToñy Torres yenzayo Usuku olu-1 .
Ukutyeba kuhlala kunxulunyaniswa nokuba sempilweni kwaye oku kuphosakele ngokupheleleyo kwaye kunokubangela ...
Yintoni i-premenstrual syndrome?
por UToñy Torres yenzayo Iintsuku ze3 .
I-Premenstrual syndrome ibhekisa kwinani elikhulu leempawu ezinxulumene nexesha lokuya exesheni. Iimpawu eziqhelekileyo kunye neempawu ...
I-Superfoods ekufuneka uyibandakanye kwisidlo sakho
por UToñy Torres yenzayo Iintsuku ze4 .
Xa kufikwa kwisondlo kunye nokutya, awusoze wathi yonke into ibhaliwe. Kungenxa yokuba, ngethamsanqa, yonke imihla yenzeka ...
Ukuzivocavoca kunye nokuzolula intamo
por USusana godoy yenzayo Iintsuku ze4 .
Namhlanje ngaphezulu koqeqesho ngokwalo, siza kuthathwa luthotho lokuzilolonga okanye ukuzolulela ...
Ukutya oku-5 ukuphucula ukuhamba kwamathumbu
por UToñy Torres yenzayo Iintsuku ze5 .
Ukuba nokuhamba kakuhle kwamathumbu kubalulekile ukonwabela impilo entle. Kuba ukuphelisa inkunkuma emzimbeni ...
Ungazithintela njani i-blisters ezinyaweni zakho xa ubaleka
por UToñy Torres yenzayo Iveki e-1 .
Xa ubaleka kunokwenzeka ukonzakala ngeendlela ezahlukeneyo kwaye ke ngoko kubaluleke kakhulu ukulungiselela umzimba ngokuchanekileyo ngombono ...
Vitamin B3: Izibonelelo zayo, ukutya nokunye okuninzi
Uyazi ukuba zininzi iivithamini esihlala nazo yonke imihla. Zonke zinoluhlu lwezibonelelo ...
Ukulungiselela isidlo, izibonelelo zokucwangcisa imenyu yeveki
Ukucwangcisa imenyu yeveki ngeyona ndlela ingcono yokulawula into oyityayo, indlela oyitya ngayo kunye nendlela o ...
Yintoni i-lymphatic drainage kwaye yenzelwe ntoni?
Umsele weLymphatic lunyango lwekhabhathi efuna ukukhuthaza ukujikeleza kwe-lymph ngu ...
Indlela yokwenza ukuba ixesha lakho lihle ngokukhawuleza
Olona hlobo lonyango lusetyenzisiweyo
Ukuphelisa njani ukuqaqanjelwa lizinyo?
Ukusetyenziswa kweVicks Vaporub
Iinyama, kufanele ukuba sothuke nini?
Wazi umsebenzi wazo zonke iivithamini
Iyeza lenyukliya, yintoni kwaye yenzelwe ntoni
I-Magnesium carbonate ngummangaliso emzimbeni wakho
Uyenza njani inyathelo elifanelekileyo lokuthambisa
Ukuzivocavoca okulula ukukhulula intamo
I-Sequelae yeBulimia kunye ne-Anorexia